ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, တစ်ခြေသလုံးရှိပါတယ်အဖြစ်ရထားခရီးသွားလာ သည်အခြားအားသာချက်တွေအများကြီး. သင်သည်သင်၏အချိန်အတွက်အရာအားလုံးတွေ့ကြုံခံစားရ, နှင့်ရထားချောချောမွေ့မွေ့နဲ့မဆိုကူညီပြီးမပါဘဲသင်ကလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေပူဇော်. ဒါဟာရံဖန်ရံခါနှေးကွေးနေပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုခရီးသွား၏ဤ mode မှာရှိမယ့်, သော်လည်း လေယာဉ်တစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာများမှာ. သငျသညျလေယာဉ်နှင့်အတူသွားလာနေလျှင်, ၏စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ဖိစီးမှုရှိပါတယ် ရေအလွန်ထူထပ် လေဆိပ်နှင့် overzealous လုံခြုံရေးအစီအမံများ. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, တချို့ဖြစ်ရပ်အတွက်, သင်တစ်ဦးရထားယူလျှင်သင်ပိုမြန်သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရလိမ့်မယ်!
သင်ကခြေသလုံးအဖြစ်ခရီးသွားလေ့ကငျြ့သောအခါအငွေ Save လုပ်နည်း
တစ်ခြေသလုံးအဖြစ်ရထားခရီးသွားဧည့်ခန်းစာအုပ်သွားသည့်အခါသုံးစွဲအများစုမှာပိုက်ဆံ. သို့သျောလညျး, သငျသညျနေထိုင်ရန်အဆောင်များစာအုပ်ဆိုင်လျှင်, သငျသညျအဖြစ်ငွေအများကြီးကိုကယ်တင်နိုင် သူတို့ပိုပြီးတတ်နိုင်ဟိုတယ်များထက်နေ နှင့်တစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးပိုအမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သင်တစ်ဦးတည်းသွားလာသည့်အခါ, သင်က၌ရှိသကဲ့သို့လူများစွာနှင့်အတူမည်သည့်အခန်းကစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်, အဆိုပါအရာဖြစ်ပါသည် စျေးအသက်သာဆုံး option ကို. ထိုအခါငါတို့တှငျယုံကြည်စိတ်ချ, ဤသူသည်သင်တို့ကိုအခြားတူသောစိတ်ခရီးသွားများအတွက်ပေါင်းသင်းသွားလာခြင်းမှအခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ဤချင်လိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့ငွေစုမှာကွာစားသောနောက်လာမည့်အရာဖြစ်ပါသည်, ကောင်းစွာ, စား. သင်ကဘော်ဒါဆောင်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်း၌သင်တို့၏အစားအစာများပြင်ဆင်နေခြင်းဖြင့်အစားအစာအပေါ်ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ. အများစုမှာနေထိုင်ရန်အဆောင်များနှင့်တိုက်ခန်းများကိုသင်အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည့်မီးဖိုချောင်ပူဇော်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, အဆိုပါဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်အခြားအခွင့်အလမ်းကိုလူတို့နှင့်အတူထွက်ဆွဲထားနှင့်အချို့သောကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်ပါသည် အစားအစာများ ဝေမျှဖို့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-nomad-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)